Xiriirka udhaxeeya isboortiga iyo siyaasada: 18kii Agoosto, 1964 South-East Africa waxaa laga mamnuucay ciyaarihii Olambikada, ilaa 1990me, dadka Madoow ee South Africa, iyo waliba dhamaan dadka aan cadaanka aheyn sida Hindida, oo wadanka joogtay waxaa lagusoosaaray kala saarid looyaqaano "Afrikaner - apartheid"
Xiriirka udhexeeya isboortiga iyo siyaasada: 18kii Agoosto, 1964 South-East Africa waxaa laga mamnuucay ciyaarihii Olambikada, ilaa 1990me, dadka Madoow ee South Africa, iyo waliba dhamaan dadka aan cadaanka aheyn sida Hindida, oo wadanka joogtay waxaa lagusoosaaray kala saarid looyaqaano "Afrikaner - apartheid"
Posted By: KongoLisolowaa: Agoosto 23, 2020 16: 12 1 Comment
Haddii kala soocitaanku si tartiib tartiib ah looga hirgaliyay dalka, waxay runtii noqotay rasmi ah 1948. Markii ay wajaheen midab kala sooca iyo xadgudubyada rabshadaha wata, bulshada caalamku waxay la kulantay fal celin lid ku ah. Wadamada qaar kama labalabeynin inay dhaleeceeyaan kala sooca, halka kuwa kale, sida Mareykanka, ay siiyeen xiriirkii ganacsi ee ay la lahayeen nidaamkii Afrikaner, si ay u waxyeeleeyaan qiimayaasha ay sheegteen inay difaacayaan.
Kalasaarka ayaa sidoo kale saameeyay adduunka isboorti: Koonfur Afrika kaliya waxay u dirtay ciyaartoy caddaan tartamada caalamiga ah. Sanadkii 1964, xilligii Olombikada Jiilaalka ee Innsbruck (Austria), Guddiga Olombikada Caalamiga (CIO) ayaa shaaca ka qaaday qorshayaal lagu joojinayo kaqeybgalka South Africa Ciyaaraha Olimbikada Xagaaga ee Tokyo (Japan), oo loo qorsheeyay Oktoobar 1964. Guddigu wuxuu la raacay go'aankiisa go'aan kama dambeys ah. Markaa, waddanku wuxuu si rasmi ah u dhalleeceeyay midab-kala-sooca oo joojiyey dhammaan takooristii ciyaaraha illaa Agoosto 16, 1964.
Bishii Juun 1964, Guddiga Olombikada ee Koonfur Afrika wuxuu ku dhawaaqay inay u diraan Tokyo 7 ciyaartooy oo aan cadcad ahayn Tokyo -oo ka mid ah 62-ka xubnood, ee ay kooxda Olombikada leeyihiin. Go'aankan ayaa loo arkaa mid aan ku filnayn IOC, kaasoo si rasmi ah ugu dhawaaqay xayiraadda South Africa ka-qeybgalka Ciyaaraha Olombikada 18-kii Agoosto, 1964. Xayiraadaha kale ee garoonka ciyaaraha waxay saameeyeen dalka; Ciyaartoyda xulka Koonfur Afrika ayaa laga mamnuucay horyaalnimada Wimbledon iyo Xiriirka Kubadda Cagta Caalamka (FIFA) sidoo kale waxay mamnuucday ka-qaybgal kasta oo Koonfur Afrika ka socda tartamadeeda. Ma ahayn ilaa 1992 iyo ciyaarihii Olimbikada ee Barcelona (Isbaanish) si South Africa -taas oo meesha ka saartay sharciyadii midabtakoorka sanadkii hore - mar labaad ka qeybgal tartamada Olambikada.
Arthur Ashe: wuxuu dhashay Luulyo 10, 1943 oo markuu jiray 20 jir wuxuu helay deeq waxbarasho oo albaabada u furay kooxda tennis-ka Mareykanka, “Waa qofkii ugu horreeyay ee Afrikaan Mareykan ah ee taariikhda Tennis-ta ee ka qeyb gala koobka. Davis '
Khabiirada cilmu-nafleyda ee khidmada raasamaalka; mashiinka raasamaalka ayaa isu muujinaya inuu yahay mid aad u awood badan sidaas darteedna uu isku dayo inuu burburiyo wax walba oo dariiqiisa ah; waxay si fiican u jiidan kartaa saynisyahano sida kuwa cilminaar-yaqaanada badan oo loo yaqaan'ptoptologists ', laakiin weligood ma burburin karaan runta taariikhiga ah
23 / 08 / 2020 19 h 28 min
Intaas ka dib waxaad dooneysaa kaliya kursi oo aad weydiisaa sababta dadka madow ay ugu dagaallamayaan caddaaladda !!
Sep30 06: 24